Yindawo yokuhlala yaseTiê Hostel Igumbi lokulala eli-1 (isibini) - I-Airbnb
Yindawo yokuhlala yaseTiê Hostel Igumbi lokulala eli-1 (isibini)
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguBeatriz
UBeatriz ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ifakwe kweyona ndawo ithuleyo yesiqithi sasePaquetá, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla ngokukhuselekileyo. Iintaka ezicula ngasemva kwendlu kunye nesibhakabhaka esihle sasePaquetá senza okusingqongileyo.
Indlu okulala amabini, igumbi lokuhlamba, ikhitshi bexhobile, balcony ezinqwenelekayo, okulala kunye umyezo onobabalo, ukongeza yokudlela namagumbi ophilileyo, kufuneka itafile isidlo, kwekhuselo, pfumerile, omnyama-phandle, iingcongconi umnatha. Nezinye izinambuzane, ukukhanya LED, i-whitebaord interactive apho iindwendwe, abadala okanye abantwana, uyakwazi ukubhala okanye uzobe ngokukhululekileyo kunye 'ikona ngokufunda' zethu ... egumbini ofudumeleyo apho ungasebenzisa yamanqaku yakho okanye ufunde amaphephandaba, iincwadi kunye neemagazini.
Ngokuphathelele amagumbi - jonga inkcazo phantsi "Okunye ukuQwalasela".
Ikhitshi inefriji, isitofu, ihood, iikhabhinethi ezakhelwe ngaphakathi, izitya ezahlukeneyo, i-oven microwave, umenzi wekhofi kunye negridi yombane, i-blender kunye nesihlungi sokucoca amanzi (indalo kunye nokubanda).
Unokukhetha kwakhona iikona zakho ezincinci kwiibhalkhoni. Ngaphambili, phakathi izitulo okanye koomandlalo ... Okanye kwiveranda emva, nto leyo iba minibar lokugcina iinkonkxa itafile encinane apho kwakhona komulela ngaphandle, ivuyela kusasa nasemva kwemini ilanga, kwakunye kwendlu yethu, nto leyo yindawo egcinwe ngakumbi.
Kulapho sigcina khona ikona edumileyo yeeTiês, ezisoloko ziza kutya kwaye zisibonisa ubuhle babo obugqithileyo.
Indlu ikwanazo nezibane zikaxakeka kuwo onke amagumbi angaphakathi, ngaphandle kweepaseji. Kwaye sinikezela ngentsimbi, eqhelekileyo kuwo omabini amagumbi.
Sinethemba lokusebenzela wonke umntu ngeyona ndlela ilungileyo kwaye ukonwabele ukuhlala nathi!
Indawo yokubhaka ibekwe malunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwindlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Beatriz
Inombolo 21 9978-86911